विवाहमा दुई अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्चः ३ सय क्विण्टल फोहोर, २ लाख ५० हजार जरिबाना « Bagmati Samachar
विवाहमा दुई अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्चः ३ सय क्विण्टल फोहोर, २ लाख ५० हजार जरिबाना
१६ असार २०७६, सोमबार १६:०३
१६ असार । काठमाडौ । भारतको उत्तराखण्डको अउली नगरमा एक वैवाहिक कार्यक्रमका क्रममा थुप्रिएको करिब तीन सय क्विन्टल फोहोर विसर्जन गरिएको छ ।
Auli: Kritika Singhal, daughter of diamond merchant Suresh Singhal and Suryakant, son of industrialist Ajay Gupta during their wedding ceremony, in Auli, Thursday, June 20, 2019. (PTI Photo) (PTI6_20_2019_000171B)
जोशीमठ नगर निगमका सफाई कर्मचारी अनिल कुमारले बिहेका कारण दुर्गन्धित भएको इलाका पुरै सफा गरिएको जानकारी दिनुभयो । गुप्ता परिवारको विवाह समारोह गत जुन १८ देखि २२ तारिखसम्म भएको थियो ।
गुप्ता परिवारका सदस्य अजय गुप्ताले सफाइका लागि भारतीय रुपैयाँ ५४ हजार नगर निगमलाई भुक्तानी गरेको बताउनुभयो । निकै भव्य रुपमा गरिएको यस विवाह कार्यक्रममा करिब भारु दुई अर्ब खर्च भएको बताइएको छ ।
तर नगर निगमले फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै गुप्ता दाजुभाइलाई २ लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ जरिबाना लगाएको छ । त्यस्तै फोहोर संकलन गर्दा लागेको खर्च झण्डै ८ लाख रुपैयाँ गुप्ता दाजुभाइलाई तिराइने नगर निगमले जनाएको छ ।
नगरका विभिन्न स्थानमा छरिएको फोहोर सफा गर्न २० जना सफाइ कर्मचारी खटाएको पनि नगर निगमले जनाएको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.: xxxx/०७७/७८ संगम चोक, हेटौंडा +९७७ ९८५५०७७५५० [email protected].com [email protected]